Liverpool Oo Rikoodh Cusub U Dhigtay Yurub Ka Dib Markii Ay Garaaceen Tottenham, Reds Oo 16 Dhibcood Ku Qabatay Hogaanka
Sunday January 12, 2020 - 00:40:26 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Liverpool ayaa rikoodh aan hore looga dhigin Yurub loo diiwaangeliyay ka dib markii ay 1-0 ku garaaceen kooxda
Tottenham oo marti loo ahaa, iyagoo 16 dhibcood oo nadiif ah ku qabtay hogaanka horyaalka Premier League oo durbaba gacantooda bidix ku jira.
Liverpool ayaa taariikh abuurtay waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay taariikhda ee 61 dhibcood hesha 21ka kulan ee ugu horeeya xilli ciyaareedka ee shanta horyaalka ee ugu waa weyn Yurub.
Labo daqiiqo ayay ku qaadatay in Liverpool ay fursad dahabi ah hesho markii ay koorno ay soo tuurtay Tottenham ay iska bixiyeen islamarkaana ay kubad rogaalcelis degdeg ah qaadeen. Firmino ayaa goolka loo fasaxay laakiin da’ yarka daafaca Spurs Tanganga oo kulankiisii ugu horeysay ee Premier League ciyaara ayaa ka difaacday kubada.
Kubadii soo laabatay waxaa helay Oxlade-Chamberlain kaasoo darbadiisa ay ku dhacday birta goolka iyadoo ay kubada ku sii dhacday Tanganga oo nasiib ku lahaa inuusan gool iska dhalinin ka hor inta uusan goolhaye Gazzaniga kubada qabsan.
Daqiiqadii 22aad ayay ku dhawaatay Liverpool inay hesho goolkeedii koowaad markii koorno ay soo qaadeen uu xerada ganaaxa ku dhex nooleeyay Mohamed Salah oo kubada u reebay Henderson kaasoo isna karoos gaaban u qaaday Van Dijk oo birta agtaagnaa, kubadii uu madaxa la helay Van Dijk oo gool loo fishay waxaa si fantastis ah u soo bixiyay goolhaye Gazzaniga.
Liverpool ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqadii 37aad markii Mohamed Salah uu kubad u dhigay Roberto Firmino kaasoo ka wareegsaday da’ yarka Tanganga ka hor inta uusan kubad darbo kulil dabamarinin goolhaye Gazzaniga.
Kulankii 21aad oo isku xigta ayay Liverpool shabaqa soo taabatay markii ugu horeysay ee ay Reds gool dhaliso 21ka kulan ee ugu horeeya xilli ciyaareedka tan iyo xilli ciyaareedkii 1933-34.
Daqiiqadii 58aad Tottenham ayaa fursad fiican heshay iyadoo Van Dijk uu si fiican u difaacday balse kubadii baxsatay waxaa helay Serge Aurier kaasoo darbo xoogan ku tuuray goolka laakiin waxaa isku duubay goolhaye Alisson.
Daqiiqadii ku xigta Mohamed Salah ayaa banaanka xerada ganaaxa kubad ugu dhigay Firmino laakiin darbada xiddiga reer Brazil waxaa qabtay goolhaye Gazzaniga.
Daqiiqadii 65aad goolhaye Gazzaniga ayaa hal gacan ku badbaadiyay kubad madax halis aheyd oo uu soo tuuray Sadio Mane iyadoo Reds ay cadaadis xoogan saareysay kooxda Spurs.
Sidee ayay Spurs ku dhalin weysay goolka barbaraha daqiiqadii 83aad? Serge Aurier ayaa karoos fiican ka soo qaaday garabka midig, waxaa isagoo duulaya kubada taabtay Lo Celso, waxay markii hore u muuqatay mid shabaqa ku nasaneysa laakiin waxay si ciriiri ah ku hareermartay goolka.
Mourinho ayaa rumeysan waayay fursada kooxdiisa ka qasaartay isagoo jilbaha dhulka dhigtay halka Klopp uu uga jawaab celiyay inuu ku qeyliyo xiddigihiisa.
Ilbiriqsiyadii ugu danbeeyay goolhaye Alisson ayaa fursad kale oo fiican ka badbaadiyay xiddiga reer South Korea Son.
Reds ayaa ilaashatay goolkeeda waxayna ciyaarta ku soo dhamaatay 1-0 oo ay Reds ku badiyeen iyagoo haatan hogaanka horyaalka ku haya 16 dhibcood oo nadiif ah islamarkaana uu kulan u harsan yahay.
Haddii Man City ay berri ka badiso Aston Villa waxay hogaanka Liverpool ka dhigi kartaa 14 dhibcood iyadoo kooxda Pep Guardiola ay markaas oo geli doonaan kaalinta labaad.